Rullaluistemadka Vibratory Ride-on
Steering Roller gariirka Double-Drum
Duubista Wareegga Laba-Drum
Duubista-Drum Roller Vibratory
KCD Oogada Dhammaystirka Dusha sare
Weeraryahanka saxanka Forward
Iskuduwaha Saxanka Qalabka
VR warshad qodista
Mashiinka gariirka la taaban karo ee caanka ku ah Yurubta
Macaamiisha qaaliga ah, waxaan nahay soo saaraha mashiinka dhismaha wadada. Haatan waxaan arki karnaa isticmaale shaqsiyadeed oo aad u badan oo loogu talagalay gariire bir ah. Marka waxaan kaliya rabnaa inaan helno horudhac gaaban mashiinka noocan ah. Qalabka birqaya ee shubka ayaa leh astaamaha soo socda: 1) Wuxuu korsadaa o ...
Farsamooyin Cusub oo loogu talagalay Bamka Biyaha Biyaha ee Australia
Bamka Biyaha wuxuu siiyaa waxqabad muuqda barnaamijyada bamgareynta guud ee biyaha. Hadday ahaan lahayd nadiifinta shaqada culus, waraabinta beerta ama ka soo saarida maqaasiinka daadka. Alaabooyinkani waxay leeyihiin taangiga rarka dheeriga ah. Taangi weyn oo 2L weyn ah ayaa ka dhigan inuu socon karo illaa laba saacadood hal ...
Qaabka cusub oo wata matoorka perkins kaas oo caan ka ah UK
Shirkaddayadu had iyo jeer waxay diiradda saareysaa horumarka iyo horumarinta faahfaahinta mashiinkeenna. Hadda waxaan rabnaa oo keliya inaan hagaajino wadnaha mashiinkeenna oo ku habboon mashiinka aag badan. Mashiinka Perkins ee ka yimid England, sidaan wada ognahay mishiinka yanmar wuxuu sababayaa cod yar wuxuuna sidoo kale sameeyaa awood yar abo ...
Wadada lagu arko ee la taaban karo ee lagu arkay Xakamaynta Boorka ee England
Si aad ugu haboonaato jawiga kala duwan ee England, shirkadayada kaliya waxay heshaa hal mishiin cusub oo ku habboon baahidaada. Mashiinka dheemanka dheemanka lagu arko ee la taaban karo badanaa laser baa la dhajiyay, caadi ahaan waxaa loogu talagalay jarista qoyan maxaa yeelay shubka la jarayo badanaa waa mid aad u adag ama xoqan. Haddii garbaha ...
Mini excavator oo ah dhiirrigelin iyo qalab bilaash ah macaamiisha cusub ee Faransiiska
Hadda jeer qodista yaryar ayaa aad iyo aad caan uga ah beeraha iyo beerta shaqsiga ah. Waxaan arki karnaa halkan waa faahfaahinta taageerada. 1.Good gacmaha lulid wanaagsan. Gacanta luliddu waxay ku tiirsan tahay hal bamka korontada ku shaqeeya, in dhammaan taxanaha CXA, CXB ay leeyihiin lifaaqan. Iyada oo qaybahan, Arm ca ...
Istiraatiijiyadda saxanka oo caan ku ah Romania ayaa qancisa dhammaan heerarka EU
Dhismaha, waxaa jira saddex nooc oo isukeenjiye ah: saxanka, tumaalka, iyo rullaluistemadka wadada. Iyo Ace-mashiinku wuxuu diirada saaray tuubada iyo saxanka, maanta waxaan kaliya dooneynaa inaan ka sameyno hordhac kooban oo ku saabsan saxanka saxeexa. England gudaheeda magaca “saxan wacker” ama kaliya “wacker ...
Trowel-ka korontada fog waxtarka leh.
Horumarinta farsamada, hadda mashiinku wuxuu leeyahay qaab caqli badan mararka qaarna wuxuu ku siin karaa adeegsi ka wanaagsan kan dhaqameed. Hada shirkadeena waxay unameyneysaa hal mishiin cusub dhismaha wadada. Waa nooc ka mid ah quwadaha awoodda. Waxay umuuqataa wax yar oo ka duwan mashiinkeena caadiga ah wh ...
Power Trowel alaabada caanka ah ee mashiinka dhismaha wadada.
Trooleyaashayadu waxay si buuxda u dhammaystiraan kala duwanaanshaheena hadda jira, iyagoo isku xiraya geeddi-socodka oo dhan laga soo bilaabo isku-darka dhulka illaa sagxadaha sibidhka leh, waxayna si fiican ugu habboon yihiin istiraatiijiyaddeenna qeybsiga si aan u kobcinno meheradaha la taaban karo iyo Dabaqa. Marka lagu daro gawaarida lagu raaco gawaarida waxaan hadda yeelan doonnaa comp ...
Bamka biyaha mashiinka dooro oo alaabtu muujiyaan
Bamka waa qalab dhaqaajiya dareerayaasha (dareerayaasha ama gaaska), ama mararka qaar slurries, ficil farsamo, caadi ahaan looga beddelo tamarta korantada tamarta Haydarooliga. Bambooyin ayaa loo kala saari karaa saddex kooxood oo waaweyn iyadoo loo eegayo habka ay u dhaqaajinayaan dareeraha: wiish toos ah, barakac, ...
Taariikhda iyo Nooca Mashiinka la taaban karo
Mashiinka la taaban karo (oo inta badan si iskumid ah loogu yeero iskudhafka sibidhka) waa aalad si isku mid ah isugu daraysa sibidhka, isu geynta sida carada ama quruuruxa, iyo biyaha si ay u sameyso shub Mashiinka la taaban karo ee caadiga ah wuxuu adeegsadaa durbaan wareegaya si uu isugu daro qaybaha. Mid ka mid ah waxyaabihii ugu fiicnaa ee la taaban karo abid ayaa la soo saaray 19 ...
Lifaaqyada Mini Excavator si loo sameeyo Shaqada Fiican
Qashin-qodeyaasha yaryar waxaa inta badan doorbida goobaha shaqada ee leh meelo adag, awoodna u leh inay aadaan meesha mashiinnada waaweyn aysan ka bixi karin Qodobo yaryar ayaa ku habboon shaqada daarada, gudaha dhismayaasha iyo hareeraha hareeraha qodista, qaadista iyo nadiifinta. I DIGGER baaldiyo caadi ah ayaa dhulka qoday ujeedooyin badan awgood, ...
Mashiinka la taaban karo waa inuu ku qanacaa baahiyaha isticmaalayaasha dhamaadka
Sanadihii 2020-kii ee la soo dhaafay isku dhafka la taaban karo sidoo kale waa badeecadaha ugu sarreeya ee laga iibiyo shirkadeena, waxaanan soo bandhigi karnaa cabbirka ka duwan Mini (80L) ilaa gaari xamuul ah (4.3 CBM) Dhamaan macaamiisheena kaliya waxay rabaan inay qabtaan shaqo ka fiican. Taasi alaab-qeybiye ahaan, alaabtu waxay kuxirantahay alaabta ceyriinka ah iyo farsamada wanaagsan. Marka ...
Hadafka: Waxaan bixinaynaa qalab dhisme oo casriyeyn ah waxaan kuu fududeyneynaa noloshaada shaqada